Soratana ho tadidy 22 janoary 2018
2018-01-22 @ 17:57 in Ankapobeny
Noraofin'ny mpitandro ny filaminana ny finday sy ny fakantsarin'izay rehetra naka sary ny zavatra nataon-dry zareo tamin'ny fanitsahana ny fanamafisam-peo sy ny fanakanana ny olona tao Tolagnaro, na Fort Dauphin, any atsimo atsinanan'i Madagasikara hihaona amin'Atoa Ravalomanana. Tanora iray no nilaza izany tamin'ireo olona hafa naka sary azy, raha ny fomba filaza dia voaendaka izy ka nolazainy fa any amin'ny kapiteny iray manana ny lazany (atsimo) no maka azy indray raha haka ny findainy izy. Nandalo tany amin'ity faritra ity manko Atoa Ravalomanana Marc, filoha teo aloha, ary karazana fanohintohinana azy no mahatonga izao toe-javatra izao.
Efa ho herinandro koa izay no nalaza ny raharaha Arfa, ilay "gadra nandositra" ka any Frantsa vao nitranga indray, nidradradradra ity ranamana ity fa nandoa vola 70.000 euros tamin'ny minisitry ny fitsarana malagasy sy 30.000 euros tamin'ny tonia mpampanoa lalàna eto Antananarivo, izay samy vehivavy avokoa. Ny minisitry ny fampahalalam-baovao, izay mpanao gazety ihany koa, no niaro voalohany ny minisitra. Rehefa niteny ny amin'ny tsy misy ilaina hihainoana gadra sy mpanao heloka ny filoham-pirenena vao nanoka-bava ny minisitra mpitàna ny tombokasem-panjakana fa hitory ity teratany frantsay ity.